Maxkamad ku taalla Talyaaniga oo xukun ku riday Mukhalas Somali ku lug lahaa geerida Boqolaal Tahriibayaal. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxkamad ku taalla Talyaaniga oo xukun ku riday Mukhalas Somali ku lug lahaa geerida Boqolaal Tahriibayaal.
Maxkamadda Rafcaanka ee magaalladda Palermo ee dalka Talyaaniga waxay shalay xukun ku riday Nin Somali ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cilmi Muxiyaddiin, kaasi oo lagu helay inuu ka dambeeyey geerida ugu yaraan 366 Tahriibayaal u badnaa Eriteria, kuwaasi oo ay doonidii la socdeen ku degtay meel ka baxsan Jesiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga bishii October 3-dii ee sannadkii 2013-kii.
Warkan oo aan ka soo xiganay Wakaalladda Wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa lagu sheegay in Maxamuud Cilmi Muxiyaddiin ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey Doonida, waxayna dadkii la socday sheegeen inuu ahaa mid ka mid ah Mukhalasiiinta Tahriibayaasha ka soo dhoofiya Xeebaha Yemen, si ay u soo gaaraan Xeebaha Talyaaniga.
Maxamuud Cilmi Muxiyaddiin waxaa sannadkii hore lagu helay Tahriibinta dadka, inuu kufsi iyo jirdil u geystay Tahriibayaal ka badbaaday doonida uu la socday.
Duqa magaalladda Lampedusa, Giusy Nicolini ayaa sheegay in qof kasta oo dhibaato geysta sida Maxamuud Cilmi Muxiyaddiin la hor keeni doono Caddaaladda, wuxuuna xusay inuu Eedeysanaha si caddowtooyo leh ragga u jir-dili jirey, halka haweenka dhallinyaradda ee Eritreanka uu kufsan jirey, waa sida uu hadalka u dhigay Duqa Lampadusa.
155 Tahriibayaal ka badbaaday doonidaasi oo ka kala yimid Eritrea iyo Saxaraha ayaa u sheegay Boliska inuu Eedeysanaha kufsaday gabdho u kala dhashay Somalia, Eritrea iyo Syria muddadii uu la socday doonida uu dadka ku soo tahriibiyey.
Dhinaca kale, Garsooraha Maxkamadda Rafcaanka ee Palermo ee dalka Talyaaniga waxa uu Eedeysanaha Maxamuud Cilmi Muxiyaddiin ku riday xukun 30 sanno oo Xabsi ah.
Tahriibayaal Somalia iyo kuwa ka soo jeeda Geeska Afrika oo laga soo masaafuriyey dalka Costa Rica
Ciidamada Dowlada oo Howlgalo ka sameeyay Degmada Qoryooley